हेग पुगेर फर्केका बालसैनिक लेनिन बिष्टको चेतावनी , माग पुरा नभए प्रचण्ड लगाएत युद्धका दोषीहरु जेल जान्छन || सुनौलो नेपाल
हेग पुगेर फर्केका बालसैनिक लेनिन बिष्टको चेतावनी , माग पुरा नभए प्रचण्ड लगाएत युद्धका दोषीहरु जेल जान्छन
असार २३ काठमाडौँ बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका संयोजक लेनिन विष्ट तीन महिने युरोप बसाइ सकेर नेपाल फर्किएका छन्। द्वन्द्वकालमा लडाकू बनाएका बालबालिकाहरुका बारेमा जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उनी युरोप गएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्व अपराध अदालत हेगमा समेत पुगेर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको बालसैन्य प्रयोगबारे छलफल गरेका विष्टले बेल्जियम पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरर्गत बालबालिका तथा सशस्त्र हिंसामा परेकाहरूका लागि राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि भर्जिनिया गाम्बासँग भेटवार्ता गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रस्तुत छ यी र यस्तै बिषयमा उनीसंग सुनौलो नेपालका लागि महेश पौडेलले गरेको कुराकानीको केहि अंश,
तपाई युरोप जाने भन्ने कुरा धेरैपटक भयो एकपटक त्रिभुवन विमानस्थलबाटै सरकारले फिर्तासमेत गरायो। तर यसपटक भने तपाई युरोप गएर फर्कनुभयो । कसरि सम्भब भयो ?
मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु ८ ९ वर्ष अगाडिदेखि हामीले आफ्नो अधिकारका लागि नेपालमा धेरै प्रयास गर्दै छलफल गर्ने कोसिस गर्‍यौं तर नेपाल सरकार र सम्बन्धित पूर्वनेतृत्वहरुले यसमा ध्यान नदिएपछि हामीले आफ्ना शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरु जारी राख्याैँ। यसै क्रममा यहाँ म नेदरल्याण्ड सरकारकै सहयोगमा आएको हुँ। आउने क्रममा पनि मेरो नाम ब्ल्याकलिष्टमा नै राखिएको रहेछ। म बाहिर आएँ भने नेपालको बाल सेनाको विषय युद्ध अपराधको विषयचाहिँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सेयरिङ गर्छु अन्तराष्ट्रिय समुदायको ढोका ढक्ढकाउँछु भन्ने नेपाल सरकारले बुझेका कारण मलाई आउने क्रममा फेरि पनि रोकिएको थियो। ८ ९ जना इमिग्रेसनका साथीहरु हुनुहन्थ्यो ४५ मिनेट जति रोकेर उहाँहरुले कस–कसलाई फोन गर्नुभयो। मेरो सबै डकुमेन्ट कपी गर्नुभयो। तर उहाँहरुले निर्णय लिन नसकेका कारण होला अथवा रोक्न नमिल्ने कारण म आउन सफल भएँ। मेरो फ्लाइट राति २ बजेको थियो त्यसैले पनि फोन गर्दा नेतृत्वको फोन उठेन होला वा के भयो त्यसैले म आउन पाएँ होला जस्तो लाग्छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बाट नै न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने बिश्वास छैन तपाइँमा ?
सत्य निरुपण आयोग ढिलै गठन भए पनि द्वन्द्व पीडितहरुका लागि समग्र राज्यका लागि राम्रो कुरा थियो तर देखाउनका लागि मात्र भयो। अरुलाई मूर्ख बनाउनका लागि बनाइएको जस्तो भयो। सबै आफ्नै दलको भगवण्डाका मान्छेहरु नियुक्त गर्ने एउटा राम्रो काम उजुरी संकलन गर्ने काम भयो तर दलका नेतालाई बचाउने बाहेक अरु त केही भएन नि। न्यायालयमा हेर्नुहुन्छ भने दलको भागवण्डा छ आयोगहरुमा हेर्नुहुन्छ भने दलको भागवण्डा छ। त्यहाँ त पीडितको कुरा सुन्ने कुरा आएन नि अनि कसरि गर्ने बिश्वास ?
तपाई नेदरल्याण्डमा हुदैँगर्दा अन्तरराष्ट्रिय युद्व अपराध अदालत हेगसम्म पुग्नुभयो। त्यहाँका अधिकारीहरुसँग के कस्तो विषयमा छलफल गर्नुभयो ?
विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुखहरुसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरर्गत बालबालिका तथा सशस्त्र हिंसामा परेकाहरूका लागि राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधिसँग एकहप्ता अगाडि बेल्जियममा भेट भयो। हेगअन्तर्गत विभिन्न वकिलहरुसँग मेरो आन्तरिक छलफल भएको छ। नेपालले रोम विधान स्वीकार गरेको छैन भन्ने आएको छ।
अपराध त भएकै छ नि। राज्यपक्षले हजारौँ बालबालिका मारेको छ विद्रोहीले हजारौं बालबालिका प्रयोग गरेको छ। सबैले बालबालिकालाई निसाना बनाउने दुरुपयोग गर्ने युज एण्ड थ्रो गर्ने तर सम्बोधन नगर्ने भएपछाडि दुबै पक्षबाट अपराध भएको छ। अब यो रोम विधान स्वीकार त नेपाल सरकारले गर्दैन त्यसो भए यसको विकल्प के छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।
मैले भेटघाटमा स्पष्ट रुपमा के भने भने अनमिनले बीच बाटोमै छाडेर गयो। सबै कुरा अनमिनको भेरिफिकेसनबाटै सुरु भएको हो छाडेर गएपछि यसको जिम्मा युएनले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो विषयमा उहाँहरु गम्भीर हुनुहुन्छ, यसमा गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँहरुले सम्पूर्ण अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहोला भन्ने लागेको छ। एउटै भेटमा सबै समाधान नै हुन्छ भन्ने होइन। हामी अन्यायमा परेकालाई सम्बोधन गर्नु नै हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ।
पहिले–पहिले त तपाई सरकार, तत्कालीन माओवादी नेतृत्व र सरोकारवाला पक्ष सबैले बाल सैन्य भर्तिबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । तर अहिले तपाई सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य गतिविधिलाई हेर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मात्र केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ नि ?
दुईवटा कुरा हो एउटा जवाफदेही हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा हो अर्को भविश्यमा यस्तो घटना नघटोस् भन्ने कुरा हो। यो व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा हैन। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो पुरानो ७ बुँदे माग यथावत छ जुन सरकार र सम्बन्धित पक्षले जिम्मेबारी लिउन् जवाफदेही हुन् भन्ने छ। हाम्रो छलफल पनि त्यसैमा केन्द्रित छ। तर मान्छेहरु र केही मिडियाहरुले कोट गर्दा पुष्पकमल दाहालको मात्र गरे होलान्। तर सिधा–सिधा कुरा हिजोका सम्बन्धित पक्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शेरबहादुर देउवा बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल केही नेताहरुका कारण देशमा हजाराै‌ँ मरे। यी सबै युद्धका दोषी हुन्।
सोम, असार २३, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस